DAAWO VIDEO: Axmed Madoobe: DF Somaliya waxay iigu goodisay lacag qaado oo meesha isaga tag ama waan ku dilaynaa! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO VIDEO: Axmed Madoobe: DF Somaliya waxay iigu goodisay lacag qaado oo...
DAAWO VIDEO: Axmed Madoobe: DF Somaliya waxay iigu goodisay lacag qaado oo meesha isaga tag ama waan ku dilaynaa!
Kismaayo (Halqaran.com) – Axmed Madoobe, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa Sabtidii maanta ku andacooday in uu diiday dalab lacageed oo dowladda federalka usoo bandhigtay si uu meesha uga baxo uu booskana u baneeyo.
‘‘Waxaa maanta aniga sharaf ii ah inaanan reer Jubbaland dhaafsiisan 20 milyan oo dollar oo afka la iigu shubo, mana jiro macno aan ka gorgortami karay‘‘ ayuu ka hor sheegay maanta madaxweyne Axmed Madoobe mar uu khudbad ka hor jeediyay baarlamaanka Jubbaland.
Haddaba Hoos ka daawo Muuqaalka oo Buuxa:
ama waa lagu dilaa
dowladda ii hanjabtay